မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): တိုက်တန်းနစ်(Titanic)သင်္ဘောမြုတ်တာဟာ မြန်မာပြည်က စိန်ကြောင့်လား.
တိုက်တန်းနစ်(Titanic)သင်္ဘောမြုတ်တာဟာ မြန်မာပြည်က စိန်ကြောင့်လား.
PDF စာအုပ်က ၅ပိုင်းပါတယ် ။ ပြန်ဆက်ဖို့အချိန်မရတာကြောင့် ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါ
ဒီလင့်မှာယူပါ - တိုက်တန်းနစ်သင်္ဘော မြုတ်တာနဲ့ မွန်ဘုရင်မနူဟာမင်း၏ စိန်
သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၉ ၊ အမှတ် ၄ ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ
ထုတ်ဝေသူ = ဦးအောင်မြတ် (အယ်ဒီတာချုပ်)
၀၉-၅၁၀၁၅၃၅ ၊ aungmyathtwe@myanmar.com.mm
အမှတ်(၉၀ ၊ ၉၂ )ပန်းဆိုးတန်းလမ်း
ကျောက်တံတားမြိုနယ် ၊ ရန်ကုန် ။
ဖုန်း - ၀၁ -၂၄၀၆၉၀၊ ၀၁-၃၈၈၇၁၈
ကယားပြည်နယ် - င်္ဂါနဒီ စာပေ ၊ မီလျံနာ စာပေ
မန္တလေး ထွန်းဦးစာပေ ၊နဂါးစာပေ
ဟင်္သာတ - တလေးမော် စာပေ
ပဲခူး - သဇင် စာပေ
ပြည် -သုခ စာပေ
ဒီဆိုင်တွေမှာ ဆက်လက်စုံစမ်းဖတ်ရှု နိုင်ပါကြောင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ သတင်းထူး
လေးများ သိရပါက မျှဝေ အသိပေးကြပါလို့ဆွေးနွေးလိုလျှင် zwmnna@gmail ပါ
သူရဇ္ဖ မဂ္ဂဇင်းမှာ နိုင်ခင်မောင်လူ ရေးထားတဲ့ စာပါ ဖတ်ကြည့်မိပြီး စိတ်ဝင်စားတာ
နဲ့ PDF စာလေးလုပ်လိုက်တာပါ ။ အလုပ်ထဲမှာ Scan ဖတ်ရတာ သူဌေးသိရင်တော့
တေဘီဆရာဘဲ..ခိုသုံးရတာ.စာဖတ်သူအတွက် တစ်ခုခုရမယ်ဆို ခိုးရကျိုး နပ်တယ်
နောက်ဆက်တွဲကိုတော့. .ဒီနိုင်ငံမှာ လေ့လာလို့ မလွယ်တာကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ
လက်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ နောက်ဆက်တွဲကို ..ရှာဖွေပေးကြပါနော.....။
Author Anonymous at 11:31:00 AM
ဟုတ်ကဲပါကိုရင်ဆူးရေ..လေ့လာတွေ့ ရှိချက်တွေကို ထူးခြားရင် ပြန်လည်မျှဝေပါအုံးနော်..ကျနော်လည်း တိုက်တန်းနစ် ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ပါ (ကိတ်ဝင်းစလက် ချောထှာ..တိန်)
သားမက်ရေ နင့်မှာစာအုပ်ရှိရင် ငါ့ကိုငှားပါလား
ဖတ်ကြည့်ချင်တယ် စာအုပ်ဆိုတော့ ဘယ်သွားသွား ထဲ့သွားလို့ရတယ်လေ
အေး၇ှိတယ်လေ ငါလာရင် ယူခဲ့မယ်နော် ယောက်ခမ..မွေးစားသမီးနဲ့ တည့်ကျေးလဲမယ်..ခိခိ ညီညီရေ..ကို၇ီးယားကားက မျှော်လို့ ရသေးတယ်..အဆက်ကို ဘယ်ကရှာရမှန်းမသိသေးဘူး....တေဘီဆရာ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးလေး ညိမ်းနိုင်..ခိခိ....ဖတ်ပြီးရင် ဆက်တွဲ ရှာပေးနော်....။
အခုမှကြားဖူးတယ် ဖတ်ကြည့်အုန်းမယ် နောက်ဆက်တွဲ သိရလည်း ပြောမယ်နော် ကျေးကျေး
totally different,do be stupid,i dont believe
ဟေ့ကို..ကောင်းရင်ဖတ်..မိကောင်းရင်မဖတ်နဲ့ ..ရီရတယ်ဟေ့..ဗြဲ..မြန်မာဆို..မြန်မာလိုရေးပါ...အီးလိုနားမလည်ဘုး..သားက ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးပါခင်ညာ...တိန်....